In this Casharrada Microsoft Excel ee fiidiyowga ah, waan tagnaa baro aasaaska Excel, oo ah abuurista iyo qaabeynta miiska wax lagu daro.
Iyada oo casharradan bilaashka ah ee aasaasiga ah ee sameynta miis Excel ah
Casharradan waxaa loogu talagalay bilowgayaasha wax ogaanaya Excel.
Hordhac deg deg ah ka dib barnaamijka, waxaad baran doontaa xulashada qaabeynta hababka ugu badan ee la isticmaalo uguna dhaqsaha badan si aad ugu adeegsato unugyada aad rabto.
Intaas ka dib, waad ogaan doontaa adiga rinjiyeynta koowaad iyadoo si gaar ah loo codsanayo qaabka xisaabinta, dejinta xuduudaha, iwm.
Ugu dambeyntiina, waxaan ku dhammeyn doonnaa koorsada adoo isku dhafaya saf cusub iyo sidoo kale khaanad cusub oo miiskayaga ah, innagoo ku milmayna unugyada, isla markaana u beddelayna xaashida xaashida ...
Bilaash: Aasaaska aasaasiga ah ee sameynta iyo qaabeynta miis Excel ah Diisambar 28, 2020Tranquillus
READ Kordhinta 15% ee mushaharka caawiyayaasha guriga ee qaybta iskaa wax u qabso ah
horeBilaash ah: Sideen u isticmaalaa aaladda Excel ee 'Go To tool'?
socdaExcel Bilaash ah: Si qoto dheer VSearch